Tag: gwọọ | Martech Zone
Tag: aka ike
Brook kwa ụbọchị: Chọta Tweets Kasị Mma nke Mmasị
Wenezdee, Machị 19, 2014 Douglas Karr
Ka m na-eso ọtụtụ akụkọ na Twitter, anaghị m eso ihe ndekọ ahụ. Twitter bụ iyi m ga-elegide anya ụbọchị niile ma ọ bụrụ na m chọrọ ijide ozi niile m chọrọ na ya. Ọ bụ ezie na m hụrụ Twitter n'anya ma bụrụ ihe enyemaka dị egwu, ịchọta ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere idozi ọdịnaya ahụ na-enye aka. Brook na-enye gị ohere ịmepụta edemede wee soro akaụntụ Twitter n'ime edemede ndị ahụ.
Ndị mmadụ na-ajụkarị m etu anyị siri nwee ike ịchọta ma dee banyere ọtụtụ teknụzụ azụmaahịa dị ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na ndị ọkachamara na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na-enye anyị nsogbu nke ukwuu, mana Martech Zone abụghị saịtị akụkọ - anyị bụ saịtị iji nyere ndị ahịa aka ịchọta teknụzụ ha nwere ike ịkwalite. Ọtụtụ ngwaọrụ anyị kesara adịgo nwa oge - mana ha na-ekenye ụkpụrụ ma ọ bụ atụmatụ ahụ
Curata bụ ngwanrọ ngwanrọ, na-enyere gị aka ịchọta, ịhazi na ịkekọrịta ọdịnaya dị mkpa maka azụmahịa gị. Nchịkọta ọdịnaya bụ nkà na sayensị nke ịchọta na ịkekọrịta ọdịnaya dị mma na otu isiokwu. Curation na - enyere gị aka wulite ndị na - ege ntị. Nwere ọtụtụ ndị mmadụ ị ga-eso ha kerịta ọdịnaya gị, ndị nwere ike ịgbasa okwu ahụ. site na Neicole Crepeau na kwenye na tọghata Find - Curata nọgidere scours na
Friday, February 8, 2013 Tọzdee, Febụwarị 7, 2013 Douglas Karr
Ndị ụlọ ọrụ nwere nnukwu atụmatụ ọdịnaya anaghị egbochi uru mmemme ha nwere na ọdịnaya ha naanị na-ede. Enwere otutu ọdịnaya na-akụ weebụ ọ bụla n'otu nkeji… ụfọdụ dị mma, ụfọdụ adịghị mma. Ikike ịbanye na ọkụ ọkụ ahụ, wepụta ihe ndị bara uru, ma kesaa ya na ndị na-ege gị ntị bụ nnukwu uru karịa ndị asọmpi gị. Ọ bụrụ n'ịghọ isi mmalite nke ozi maka atụmanya gị na ndị ahịa gị, ha ekwesịghị ịchọ
MyCurator: Nchịkọta ọdịnaya maka WordPress
Tuesday, August 7, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
A na-amata ngwakọta ọdịnaya dị ka ihe dị mkpa iji nye ọdịnaya ọhụrụ maka blọọgụ gị, bulie okporo ụzọ ma sonye ma jigide obodo gị. Site na ịhazi ọdịnaya, ịnwere ike inyocha, nyocha na nyochaa ọdịnaya bipụtara na webụ wee mepụta ya maka ndị na-ege gị ntị. Anyị na-edozi ọdịnaya kwa ụbọchị na Martech - ịchọta gị ozi kachasị mkpa nke nwere ike ị nweta nsonaazụ maka mbọ ahịa gị. MyCurator bu ihe omuma zuru oke nke nhazi
Fọdụ n'ime unu nwere ike na-ajụ ihe nchịkọta ọdịnaya bụ. Enwere ọdịnaya dị egwu nke a na-ebipụta na weebụ site na Twitter, Facebook, blọọgụ, akụkọ, Youtube na ndị ọzọ. Ohere bụ na ụfọdụ n'ime ọdịnaya ahụ bara uru nye ndị na-ege gị ntị - mana ọ chọrọ nyocha, nzacha na ntinye n'ụzọ ga-enyere gị aka. Gbanye Martech Zone, anyị na-edozi ọtụtụ ọdịnaya. Otu ihe atụ bụ infographics. Mgbe anyị na-ahụ otu ton
Mgbanwe Ọdịnaya Hearsay: Curation na Syndication
Kwa ụbọchị, ndị otu anyị na-enyocha ọtụtụ narị isi mmalite nke data azụmaahịa na ịkekọrịta data ahụ site na ahịa anyị na ọwa ahịa anyị. Anyị na-eji ihe ngosi, nlekota mmekọrịta na ndị na-agụ akwụkwọ ịchọta ma nyochaa ọdịnaya - wee kpụga ọdịnaya ahụ na ndị na-ege anyị ntị na ndị ahịa na-eji ngwaọrụ dịka Hootsuite na Buffer ịkekọrịta data ahụ. O zughi ezu anyi ka anyi kere ịkowa nke anyi… Echere m na nke ahụ bụ atụmatụ na-ejide ọtụtụ